राजनीतिको दलदलमा फस्दै लायन्स क्लब – Samachar Pati
पदम श्रेष्ठ । हामी निमुखो हुनु परेको कारण हाम्रा मार्गदर्शक देश बनाउने जिम्मेवार लिनु भएकाहरुको कुशल रणनीतिको मिठो फल हो । जसले विकृति, विसंगती, अनैतिकता र भ्रष्टाचारजस्ता अमूल्य सम्पत्तिहरुलाई मलजल गरिरहेका छन् ।
आजको परिवेशले भावि सन्ततीहरुलाई सिकाएको छ । तिमी सधै परजिवी बन, आफूले केहि गर्नुपर्र्दैन, अरुले गरिदिन्छन्। तिमी बसेर खानु अर्थात् अरुले गरेका विकासका स्रोत साधनहरुलाई उपयोग गर्ने। उनीहरुले उत्पादन गर्दा १०–२० प्रतिशत मुनाफा कमाउछन् ।
त्यसबस्तु आयत गरि १ सय बाट २ सय प्रतिशत कर लगाउने । अनी भएन त दिन गुणा रात चौगुणा ? किन दुखः गर्ने ?
यही हाम्रो नियती बनेको छ। इतिहासबाट पनी हामीले अग्रजहरुको संस्कार सिकेका छौ जस्तै श्री ३ महाराज चन्द्र शमशेरले बनाएको दरबार सिंहदरबारको नामाकरण गर्नुको लक्ष्य र त्यस भित्रका कुकर्मका विरासतलाई आजसम्म अक्षरशः पालना गर्नु हाम्रा आशा भरोसा लिएर गद्धासिनज्यूहरुलाई नमन गर्नै पर्दछ। नत्र त नेपाली संस्कारको खिल्ली उड्छ। नेपाली गाथाको अपमान हुन सक्छ। सिंहदरबार नाम मात्र होइन त्यहाँ विराजमान भएपछि सबै सिंह जस्तै हुनु स्वभाविक नै हो ।
हामी नेपालीहरु बास्तवमा आज पनि एउटै मन, भावना र राष्ट्रप्रेमद्वारा ओतपोत छौं तर पनि हाम्रा नाइकेहरुद्वारा हामीलाई छिन्न–भिन्न पार्ने प्रयासहरु भइरहेका छन्। जनता जनार्दन कुनै राजनैतिक दलहरुको पेवा होइनन् स्वयम् आफै स्वतन्त्र छन् भन्ने धारणा विगतका संघीय र स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट छर्लङ्ग भएको छ।
तर पनि केही झुण्ड र निहित स्वार्थ भएकाहरुले अनावश्यक जातजाति, धर्म जस्ता पवित्र मूल्य मान्यताहरु लाई छेडखानी गर्न सल्बलाई रहन्छन्। हाम्रो भातृत्वमा खलल पु¥याइ एक आपसमा द्वन्द्व सृजना गर्ने प्रबृतिको विकास राजनीतिमा मात्र नभएर विशुद्ध सामाजिक संघ संस्थाहरुमा पनि रोग बनेर सलबलाई रहेको उदाहरणहरु हाम्रा सामुन्ने आइरहेका छन्। यो कुरा अवश्य पनि नितान्त अशोभनिय साथै अनैतिक बन्न पुगेको छ।
एउटा विशुद्ध व्यापारिक संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ नै ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ। जसको गाथा आज आएर राजनैतिक कुप्रभावको दलदलमा फसीरहेको छ। जसले गर्दा केही व्यक्ति विशेषलाई तत्कालीन फाइदा भने भएको होला तर संस्थाको विकास र मूल्य मान्यतामा आँच त अवश्य पु¥यायो नै । यो त हाम्रो र हामीले सृजना गरेर बनाएको संस्था जसो गरेपनि ठिकै भयो। सन्तुष्टी गर्नु नै पर्ने भयो तर आज त हामीमाझ एउटा होड चलेको छ अन्तराष्ट्रिय क्लबहरुको सदस्यता ग्रहण गर्ने। मौका परे विदेश पनि भ्रमण गर्ने आदि आदि।
पदम श्रेष्ठले सराङकोट न्यूजमा यो सामाग्री लेखेका छन् । यसको original News Link यहाँबाट हेर्नुहोस
धुर्मुसले भने: हामीलाई राजनीतिक विबादमा फसाइएको छ
सरकार ! नोट चल्ने, भोट चाहिँ नचल्ने ?